Vonona mandrakariva Aho hiasa ao anatinao | Fondation des Choisis de Jésus
Vonona mandrakariva Aho hiasa ao anatinao
1A_35: Anaka, vonona mandrakariva Aho hiasa ao anatinao sy amin’ny alalanao. Tokony avelanao hiasa Aho; nefa dia tsy maintsy mihena ianao mba hatanteraka an’izany. Raha mifikitra mandrakariva eo Amiko ianao, dia Izaho mandrakariva no handalo ao aminao sy amin’ny alalanao. Io fato-pifandraisana io no ilaiko ho mafy orina tsara miaraka aminao.